Maitiro ekuziva kana iyo iPhone iri yepakutanga kana kunyepa uye isinganyengedzwe 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Izvo zvinoita kuti uzive kana iyo iPhone iri yekutanga kana kunyepa neimwe nzira. Muridzi anogona kutarisa iyo IMEI (International Mobile Equipment Chitupa) kana kutarisa serial nhamba paApple webhusaiti. Uye zvakare, kune epanyama maficha ayo anobatsira kuona kana chishandiso chiri chechokwadi kana mufananidzo. Pakati pavo, iyo skrini, matikiti uye logo.
Heano maitiro ekuudza kana iyo iPhone iri yechokwadi kana kwete uye usanyengerwe.
Na IMEI uye serial nhamba
Iyo IMEI (chidimbu muChirungu che Kuzivikanwa kweInternational Mobile Chikwata) ndiyo yakasarudzika nhamba yekuzivisa yefoni imwe neimwe. Sokunge raive gwaro rekuzivikanwa rine huchokwadi hwenyika dzese. Hapana chimwe chishandiso munyika chichava chakaenzana.
Iyo serial nhamba kodhi inoumbwa nemavara uye manhamba anounganidza ruzivo nezve mudziyo, senge nzvimbo uye zuva rekugadzira, modhi, pakati pevamwe. Kazhinji, inogona kuwanikwa munzvimbo dzakafanana neIMEI.
Pane iyo yekutanga iPhone, iyi data inowanikwa mubhokisi, pane muviri weiyo smartphone, uye kuburikidza neanoshanda system.
Muchiitiko cheiyo iPhone
Kutamba / Apple
Iyo IMEI uye serial nhamba iri padyo nebhakhodhi pabhokisi rekushandisa. Enda mberi, zvichanyorwa IMEI kana IMEI / MEID (1e (S) Nhamba ye seri (2), Inoteverwa nenhamba kana alphanumeric kuteedzana. Tambo idzi dzinofanirwa kunge dzakafanana neidzo dzinoratidzwa mumibvunzo iri pazasi.
Kuti uwane iyo IMEI kuburikidza nehurongwa, ingo tevera iyo nzira Zvirongwa → Zvakajairika → About. Bhura pasi pasi pekrini kusvikira wawana chinhu IMEI / MEID mi Siriyero nhamba.
Pane iyo iPhone pachayo
Imwe neimwe iPhone ine iyo IMEI nhamba yakanyoreswa pane chishandiso chaicho. Nzvimbo yacho inosiyana nemuenzaniso. Mune mazhinji acho, inowanikwa pane iyo SIM tireyi.
Pa iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE (chizvarwa chekutanga), iPhone 1s, iPhone 5c, uye iPhone 5, zvirimo zvakanyorwa kumashure kweiyo smartphone. Inogona kuwanikwa pazasi pezwi. iPhone.
Bvudzi ID Apple
Unogona kuwana iyo Apple ID webhusaiti kuburikidza nechero internet browser. Ingo pinda zvako zvemukati zvinyorwa uye wobva wapurukira pasi kuchikamu Devices. Dzvanya pamufananidzo wechigadzirwa chaunoda kutsvaga iyo IMEI uye hwindo rinozovhurwa.
Pamusoro peiyo nhamba, ruzivo senge modhi, vhezheni, uye serial nhamba zvinoratidzwa.
Nekiyi foni keypad
Imwe nzira yekuziva iyo IMEI ndeyekutaipa * # makumi maviri nerimwe pane keyboard kiyi. Ruzivo irwo rwoga runozooneswa pachiratidziri.
Kuburikidza nebasa Tarisa kuvhara (Tarisa kuvhara)
Apple ine webhusaiti uko mushandisi anogona kutarisa mamiriro eiyo Apple garandi uye kukodzera kutenga yakawedzera AppleCare kufukidza. Kuti uite izvi, unofanirwa kuisa serial nhamba yechigadzirwa.
Kana iyo iPhone isiri yepakutanga, kodhi yacho haizozivikanwe. Kana zvese zvikafamba mushe, zvinokwanisika kuziva kana zuva rekutenga riri rechokwadi uye kana rutsigiro rwehunyanzvi uye kugadzirisa uye kufukidzwa kwebasa kuri kushanda.
Inoshanda system uye yakaiswa mafomu
MaPhones ese anoshanda chete pane iOS system. Ndokunge, kana iwe ukavhura mudziyo uye iri Android, pasina kupokana mudziyo wacho ndewekunyepedzera. Nekudaro, vanyepedzeri vanowanzo shandisa zvishandiso zvinotevedzera kutaridzika kweApple software.
Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvakakodzera kutarisa kana foni iine zvakasarudzika zvinoshandiswa, seApp Store, Safari browser, Siri mubatsiri, pakati pevamwe. Kuti ubvise kusahadzika, iwe unogona kutarisa iyo iOS vhezheni mumaseterwo.
Kuti uite izvi, tevedza nzira Zvirongwa → General → Software kugadzirisa. Ikoko, mushandisi anotarisana neiyo system vhezheni uye ruzivo nezvayo, senge zvinoenderana zvishandiso uye nhau.
Iri rairo rinonyanya kushanda kune avo vanotenga yechipiri-ruoko iPhone. Dzimwe nguva mushandisi wekutanga anogona kukuvadza iyo skrini otsiva neye isiri-Apple kana imwe yakasimbiswa nekambani.
Asi chii chinetso nekushandisa tarisisa izvo zvisiri zvepakutanga? "Non-Apple kuratidza kunogona kukonzera kuenderana uye mashandiro ezve nyaya," anotsanangura anogadzira. Izvi zvinogona kureva zvikanganiso mu kuwanda-kubata, yakakwira yekushandisa bhatiri, kubata zvisina basa, pakati pezvimwe zvipingaidzo.
Kubva ku iPhone 11 zvinokwanisika kutarisa iyo mavambo kuburikidza nesystem. Kuti uite izvi, ingo tevera iyo nzira Zvirongwa → Zvakajairika → About.
Kana iwe ukaona Meseji yakakosha pachiratidziri. Izvo hazvigoneke kuongorora kuti iyi iPhone ine yekutanga Apple skrini, kutsiva kwekutanga kunogona kunge kusiri kushandiswa.
Zvimwe zvinhu zvemuviri
Zvimwe zvinhu zvemuviri wechigadzirwa zvinogona kuratidza kuti iyo iPhone ndeyechokwadi here kana kwete. Saka kana iwe uri kufunga nezve kutenga Apple chishandiso, zvakakosha kuti iwe uzive zvimwe zvinhu.
Kubva iyo iPhone 7, Apple haisati yashandisa echinyakare mahedhifoni jack pane ayo mafoni mafoni, anozivikanwa seP2. Naizvozvo, zvinokwanisika kushandisa chete avo vane mheni-yemhando yekubatanidza, iyo imwe iyo inokutendera iwe kuti udzorezve yako smartphone. Kana ma waya asina waya, akabatana neBluetooth.
Saka kana iwe wakatenga nyowani iPhone iyo ine yakajairwa headphone jack, chishandiso hachisi chechokwadi.
Ese maPhones ane anozivikanwa Apple logo iri kuseri kwechigadzirwa. Mukutanga, kana mushandisi akatsvedza icon, ivo havaoni chero mutsauko kana zororo maererano nepamusoro pevhu.
Kunyangwe ichiwedzera kuwedzera hunyanzvi, zvinonetsa kuti vateedzeri uye vanyengeri vagadzire mhando iyi yekudhinda. Naizvozvo, mhedzisiro yacho inowanzo kuve nemukana pakati pechiso nemufananidzo weApple.
Gara wakatarwa kuti uwane rumwe ruzivo
Nechigadzirwa chiri muruoko, zvinokwanisika kuenzanisa kutaridzika kwayo nerondedzero yakaitwa pawebhusaiti yeApple. Tarisa uone ruzivo senge mavara anowanikwa iwo iwo modhi, chinzvimbo chemabhatani, makamera uye kupenya, pakati pevamwe.
Iyo kambani inototsanangura mhando yekupedzisa. Kunge "matte girazi rakagadzirwa, ine simbi isina simbi yakakomberedza furemu", mune iyo iPhone 11 Pro Max.
Ona zvakare kugona kunowanikwa kune yega modhi. Kana iwe ukapa 128GB iPhone X, chenjera, mushure mezvose, iwo akateedzana chete ane sarudzo ne 64GB kana 256GB.
Iyo iPhone haina
IPhones haina zvimwe zvakajairika mashandisirwo mumafoni mafoni kubva kune mamwe mabhureki Apple zvishandiso hazvina terevhizheni yedhijitari kana anoratidzika antenna. Ivo zvakare havana dhirowa remakadhi emakadhi kana maviri-sim.
Chenjera: mamodheru senge iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR kana gare gare iite simulation basa. Kunyangwe iine nzvimbo chete yechipu chimwe, nano-SIM kadhi uye e-SIM kadhi zvinoshandiswa, inova dhijitari vhezheni yechip.
Ngwarira pamitengo yakaderera kwazvo
Zvinotaridza sezviri pachena, asi kana kupihwa kwacho kwakanyanya kuti kuve kwechokwadi, zvakakosha kuve unofungira. Kana iwe ukawana iyo iPhone nemutengo wakaderera kwazvo mune chairo chitoro uchienzaniswa nedzimwe nzvimbo dzinovimbwa, fungira.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti zvimwe zvigadzirwa zvekutanga zvinowanzo kutengeswa nemakambani akakomba pamitengo yakaderera nekuti iwo anoratidzwa kana kugadziridzwa, anonziwo yakagadziriswa. Kazhinji, zvitoro zvinorondedzera chikonzero chekudzikiswa kwemutengo.
Iyo yekuratidzira iPhone, sekureva kwezita, ndiyo yanga ichiratidzwa kwenguva yakati. Ndokunge, iyo yanga isina kudzivirirwa pakubuda uye inogona kunge iine mamwe mamaki nekuda kwekudyidzana kwevatengi kana kwevashandi.
Chishandiso chakadzoreredzwa ndechimwe icho, nekuda kwedambudziko, chakadzoserwa kumugadziri uye chakagadziriswa zvikamu zvechinetso. Bhatiri uye neshure zvinoshandurwawo. Ivo anowanzo kutengeswa kusvika anosvika 15% kubviswa uye ane zvivimbiso zvakafanana seye smartphone nyowani.
Maitiro ekuziva kana yangu iPhone yakadzoreredzwa
Izvo zvinokwanisika kuziva kuburikidza yemuenzaniso nhamba. Kuti uite izvi, enda kuna Zvirongwa → About. Kana iyo nhamba yemhando inotanga netsamba Metro, zvinoreva kuti chitsva. Kana iwe ukatanga netsamba F, Yakagadziridzwa.
Kana nemukana ukaona tsamba P, zvinoreva kuti yakagadziriswa. Tsamba mawodzanyemba inoratidza kuti yakapihwa neApple kutsiva chishandiso chakakanganisika.